Kambani Profile&Culture - Longou International Business(Shanghai) Co., Ltd.
Webhu kuvandudza & kushambadzira
Longou International Business (Shanghai) Co., Ltd. yakavambwa mugore ra2007 uye iri munzvimbo yehupfumi - Shanghai.Iyo yekuvaka makemikari ekuwedzera anogadzira & application mhinduro mupi uye akazvipira kupa zvekuvaka & mhinduro kune vatengi vepasirese.
Mushure memakore anopfuura gumi ekuenderera mberi nekusimudzira, LONGOU INTERNATIONAL yanga ichiwedzera bhizinesi rayo kuSoutheast Asia, Middle East, Europe, America, Australia, Africa uye mamwe matunhu makuru.Kuti isangane nezviri kukura zvemunhu zvinodiwa nevatengi vekunze uye zvirinani sevhisi yevatengi, kambani yakamisa mhiri kwemakungwa masevhisi masangano, uye yakaita kudyidzana kwakakura nevamiriri nevashambadzi, zvishoma nezvishoma ichigadzira network yebasa repasi rose.
LONGOU INTERNATIONAL inyanzvi muR&D, kugadzira uye kushambadzira kweCellulose ether (HPMC, HEMC, HEC) uye Redispersible polymer poda uye zvimwe zvinowedzera muindasitiri yekuvaka.Zvigadzirwa zvinovhara mamakisi akasiyana uye zvine mhando dzakasiyana dzechigadzirwa chimwe nechimwe.
Zvishandiso zvinosanganisira drymix dhaka, kongiri, zvekushongedza zvekushongedza, makemikari emazuva ese, munda wemafuta, ingi, ceramics uye mamwe maindasitiri.
LONGOU inopa vatengi vepasirese zvigadzirwa zvemhando yepamusoro, sevhisi yakakwana uye mhinduro dzakanakisa nebhizinesi modhi yechigadzirwa + tekinoroji + sevhisi.
Isu tinopa iyo inotevera sevhisi kune vatengi vedu
Dzidza zvimiro zvechigadzirwa chemukwikwidzi.
Batsira mutengi kuwana giredhi rinoenderana nekukurumidza uye nemazvo.
Formulation Service yekuvandudza mashandiro uye kudzora mutengo, zvinoenderana nechero mutengi mamiriro ekunze, yakakosha jecha uye simende zvivakwa, uye yakasarudzika tsika yekushanda.
Isu tine zvese Chemical Lab uye Yekushandisa Lab kuti ive nechokwadi chekugutsikana kwega kwega:
Chemical labs ndeye kutibvumira kuongorora zvivakwa seviscosity, humidity, ash level, pH, zvirimo mumethyl uye hydroxypropyl mapoka, substitution degree etc.
Lab yekushandisa ndeye kutibvumira kuyera nguva yakavhurika, kuchengetwa kwemvura, simba rekunamatira, kutsvedza uye kusaga kuramba, kuseta nguva, kushanda, nezvimwe.
Multi-lingual vatengi masevhisi:
Isu tinopa masevhisi edu muChirungu, Spanish, Chinese, Russian uye French.
Tine sampuli uye counter samples dzejeti rega rega kuratidza mashandiro ezvigadzirwa zvedu.
Isu tinotarisira iyo logistic maitiro kusvika pachiteshi chengarava kana mutengi achichida.
Kambani yekugadzira kugona kuratidza
Longou International Business (Shanghai) Co., Ltd. yakavambwa muna 2007 uye yanga ichigadzira makemikari ekuvaka kwemakore gumi nemana.Tine mafekitori edu ega ega ega ekugadzira uye fekitori yedu inoshandisa midziyo inotengeswa kunze kwenyika.Kune imwechete modhi yechigadzirwa chimwe chete, tinogona kupedzisa anenge mazana matatu matani mwedzi mumwe.
Kugadzirwa kwehunyanzvi uye kuyedza
Simba R&D timu, vese inyanzvi mukuvaka makemikari uye vane ruzivo mundima iyi.Ese marudzi emashini ekuyedza murabhoritari yedu anogona kusangana nemiedzo yakasiyana yetsvakiridzo yezvigadzirwa.
Iyo kambani yakavambwa naVaHongbin Wang muzita rekambani yeShanghai Rongou Chemical Technology Co., Ltd. Uye tanga kubata nebhizinesi rekunze.
Vashandi vedu vawedzera kusvika kune vashandi ve100.
Zita rekambani rachinja kuita Longou International Business (Shanghai) Co., Ltd..
Kambani yedu yakatanga kambani yebazi Puyang Longou Biotechnology Development Co., Ltd.
Isu tinotanga kuvaka fekitori nyowani inogadzira emulsion--HANDAO Chemical.
LONGOU INTERNATIONAL parizvino ine vashandi vanodarika zana uye vanopfuura 20% vane madhigirii eMasters kana Doctor.Pasi pehutungamiriri hwaSachigaro VaHongbin Wang, isu tave timu yakakura muindasitiri yekuwedzera yekuvaka.Isu tiri boka revadiki uye vane simba nhengo uye vazere nekufarira basa nehupenyu.
Kubudirira kwedu kunotsigirwa netsika yekambani mumakore apfuura.Isu tinonzwisisa zvizere kuti tsika yake yekambani inogona chete kuumbwa kuburikidza neImpact, Infiltration uye Integration.
Chinangwa Chedu:Ita kuti zvivako zvive zvakachengeteka, simba rakawanda, uye rakanaka;
Business philosophy:imwe-yekumisa sevhisi, yakasarudzika yakasarudzika, uye edza kugadzira iyo yakanyanya kukosha kune mumwe nemumwe wevatengi vedu;
Core values:mutengi kutanga, kushanda pamwe chete, kuvimbika uye kuvimbika, kugona;
Mudzimu wechikwata:kurota, chido, mutoro, kuzvipira, kubatana uye kupikisa kune zvisingagoneki;
Chiratidzo:Kuti uwane mufaro uye zviroto zvevashandi vese veLONGOU INTERNATIONAL.
MABASA AKANAKA AKABATSIRA NECHIKAMU CHEDU KUVATEGI WEDU!
Kuratidza simba kuratidza
Iva 100% mutoro wekunyunyuta kwemhando, 0 nyaya yemhando mumabatiro edu apfuura.
Mazana ezvigadzirwa mumazinga akasiyana esarudzo yako.
Masampuli emahara (mukati me1 kg) anopihwa chero nguva kunze kwemubhadharo wemutakuri.
Chero mibvunzo ichapindurwa mukati meawa gumi nemaviri.
Kunyanya pakusarudza mbishi zvinhu.
Inonzwisisika & inokwikwidza mutengo, kuendesa panguva.